I-Cavitybacks ne-Backs Backs: Ingaba Ngomgangatho Wezakhono?
Isinyithi emva kwesinyithi nayiphi na isinyithi apho isincinci esincinci kwisitrato esisemva kwekhanda sisuswe, sivumele ukuba ubunzima bubekwe kwakhona kwi-perimeter yentloko, ekude kwinqanaba leentloko .
Isinyithi se-muscleback yinto enikezelwa kuyo nayiphi na isinyithi engenawo umqolo emva kwentloko, oko kukuthi, ubunzima bunokusasazwa ngaphaya kwe-clubhead.
Abaninzi begalufu bayakholelwa - kuba sivame ukuva-ukuba abaphakathi kunye nabasesikhundleni esiphambili kufuneka bahlale bedlala iimfono zexesha elide, ngelixa iigorha ezifanelekileyo zifanele zidlale imisiphabacks. Kodwa ngaba le bhodidi ye-golfer iyinyaniso?
Iintsimbi ezibuyela emva zilungele i-golf-handicap grifers, kodwa oku kuyinyaniso kuba akukho golfer ibhetele ukudlala i- muscleback yensimbi phezu kwesigxina sesinyithi ngaphandle kokuba i-golfer isakhono esinokwaneleyo ukuba ungaphuthelwa kwiziko le- clubface .
Yonke into enzulu ibuyele i-iron designs iya kunika ibanga elide ukusuka kwinqanaba le-off-center kunokuba nayiphi na insimbi ye-muscleback , ngenxa yokuba isinyithi emva kwesinyithi sinomzuzwana ophezulu we-inertia malunga ne-axis ebonakalayo yendawo yayo yokudakalisa .
I-formula elula: I- MOI ephezulu = Ukuphikisana okuNcinane kweNtloko evela kwi-Off-Centre Hit = Okubanzi ukusuka kwi-Off-Centre Hits. Kwabadlali ababalaseleyo kwihlabathi.
Ngomnyaka we-2007 kwi- PGA Tour , iinqwelomoya zokubuyela emva ziye zawela umyinge we-50% ngokwemigaqo yokusetyenziswa; oko kukuthi, ubuncinci becandelo lee - pros babesebenzisa i- rally back trons ngelixa abanye basebenzisa i- muscleback yinyithi .
Isizathu sokuba abaninzi abadlali basebenzise i-muscleback yetsimbi yokuqulunqa yintsimbi ngenxa yokuba bayakholelwa ukuba, enye, banokuphelelwa ngamabomu okanye badonsa ibhola ngokulula nge-muscleback kune-iron back back; kwaye, babini, bayaqiniseka ukuba "ukuziva" kwimpembelelo xa ukubetha insimbi ye-muscleback "yinto encinci" okanye iyanelisa kakhulu xa kuthelekiswa nesigxina, esenza ukuba bathemba.
(Ngaba iimfono ze-muscleback ngokwenene "zivakalelwa" ezincinci kunokuba zithintele umqolo ?
Buyela kwi- Clubs Golf Clubs FAQ ngcaciso engaphezulu.
I-1-Wood Wood Club, Umqhubi
I-Baker Team Competition Format
Yonke Into Okade Ufuna Ukuyifunda Ngomdlalo WamaGymn Shawn Johnson
Yiyiphi i-Green in the Regulation (GIR)?
Iqela le-USA kunye neMbali yeOlimpiki yeBhola yeBhola
I-Ambrose Competition okanye i-Ambrose Handicap kwiGalofu
10 Iimpawu malunga neeCarnivores
Yintoni Omele Uyazi Ngayo Engel v. Vitale and School Prayer
Funda i-English Translation ye-Liturgical Prayer, "Kyrie"
Indlela yokuhlala kwiBull
Ukubhiyozela i-Ostara nabantwana
Ulungelelwaniso lweKC rhoqo kunye nendlela yokubala
Iingcaphuno malunga neNyoka
Yimvelaphi yoSuku lweeNtshonalanga zikaAprili?